Mucaaradka Kenya oo qaadacay khudbadda uu madaxweynaha u jeedinayo baarlamaanka - BBC News Somali
Mucaaradka Kenya oo qaadacay khudbadda uu madaxweynaha u jeedinayo baarlamaanka
12 Sebtembar 2017
Waxaa lagu wadaa in maanta galinka danbe uu Madaxwaynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, khudbad u jeediyo xildhibaannada labada gole ee dalka, kuwaas oo yeelanaya kulankoodii ugu horreyay tan iyo markii la soo doortay bishii la soo dhaafay.
Haddaba arrintan ayaa waxaa gaashaanka u daruuray Isbahaysiga mucaaradka ee NASA, kaas oo sheegay in xildhibaannadiisa aanay ka qeybgalayn kulankaasi, waxa ayna ku tilmaameen mid sharciga hareer marsan, maadaama la laalay natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalka.
Haddaba xildhibaannada mucaaradka ee kulanka maanta qaadacay waxaa ka mid ah Xildhibaan Maxamed Junnet oo ka tirsan NASA, oo u warramay Axmed Badar oo marka hore waydiiyay sababta ay u qaadacayaan kalfadhiga?
Maqal Waraysi: Bandhigga masrixiyad dhamaystiran.
Waraysi: Bandhigga masrixiyad dhamaystiran.
Maqal Qaar kamid ah dhallinyarada Afrikaanka ah ee ku nool Mareykanka oo nolosha la qabsan la'
Qaar kamid ah dhallinyarada Afrikaanka ah ee ku nool Mareykanka oo nolosha la qabsan la'
Maqal Shir lagaga hadlayo kobcinta Af-Soomaaliga oo Jigjiga ka furmay
Shir lagaga hadlayo kobcinta Af-Soomaaliga oo Jigjiga ka furmay
Maqal Itoobiya: Xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ka arinsanaysa colaadda Mooyaale
Itoobiya: Xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ka arinsanaysa colaadda Mooyaale
Maqal Maxay Eritrea uga dhigantahay cunaqabateynta laga qaaday?
Maxay Eritrea uga dhigantahay cunaqabateynta laga qaaday?
Maqal Dhibaatada cudurka Macaanka uu ku hayo caruurta
Dhibaatada cudurka Macaanka uu ku hayo caruurta